Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 25)
U isticmaal flash qalabkaaga sida ogeysiisyada iftiinka
CallFlash waa codsi bilaash ah oo ka socda Dukaanka Play kaas oo naga caawin doona inaan u isticmaalno Flash-ka xarunteena si aan u helno ogeysiisyada iftiinka ah.
Barnaamijyo Cajiib ah oo loogu talagalay Android, Maanta AllMP3MusicID
AllMP3MusicID waa mid ka mid ah barnaamijyadan loogu talagalay Android-ka oo markii aad ogaato aanad samayn karin la'aantood.
Dhamaan cayaaraha waxay toos uga socdaan Android-kaaga Libre Directo, oo ay kujiraan horyaalada BBVA, Koobka Boqorka iyo Champions League
Libre Directo waa codsi bilaash ah oo loogu talagalay Android oo na siisa marin toos ah dhacdooyinka isboorti ee ugu weyn meeraha.
EvolveSMS waa codsi SMS ah oo diiradda lagu saaray Android 4.4 Kitkat
Isla abuuraha Talon-ka wuxuu ka yimaadaa EvolveSMS, oo sii wadaya shaqadii wanaagsaneyd ee laga qabtay Iskuduwaha Farriinta.
Digniinta Android: khiyaano cusub oo la adeegsanayo magaca WhatsApp
Ka digtoonow inaad ka jawaabto SMS aad heshay adoo ku andacoonaya inaadan kaaga jawaabin WhatsApp oo aad weydiiso haddii aad maalin kale ku dartay.
Cusboonaysiinta shabakada UC Browser waxay kordhinaysaa xawaaraha soo dejinta 15%
Play Buugaag: sida loo arko waxyaabaha aan ku jirin Dukaanka
Casharradan soo socda waxaan ku barayaa sida loo waafajiyo waxyaabaha aad ka kooban tahay si aad uga daawato Google Play Books ee ku jira Android-kaaga.
Google+: Sida loo suurtogeliyo / loo joojiyo soo-dejinta iyo isku-duwaha sawirradaada
Tabobar fudud oo talaabo-tallaabo ah oo leh shaashado shaashado si aad awood ugu siiso ama aad u joojiso gurmad otomaatig ah oo ku yaal Google+
Android wuxuu cusbooneysiiyaa barta madow ee dhabta ah ee Google
Cusboonaysiintaan 'Android' waa adduun ka buuxo kala qaybsanaanta Google ama uusan rabin ama uusan aqoon sida loo joojiyo.
Sida loo hubiyo in akoonkaaga Snapchat la jabsaday
Halkan waxaan ku siineynaa laba dariiqo oo aad ku hubin karto in koontooyinkaaga Snapchat ay la kulmeen weeraradii dhowr toddobaad ka hor lala beegsaday.
Gmail: Sida looga hortago qofkasta oo G + ah inuu kuu soo diro email
Casharro si loo baro sida loo joojiyo ikhtiyaarka horay loo sii cayimay ee noo oggolaanaya inaan ka helno emaylkeena Gmail adeegsade kasta oo G + ah
Google wuxuu qarxinayaa khadka u dhexeeya Google+ iyo Gmail
Google waxay bilaabaysaa hawl cusub si ay awood ugu yeelato inay emayl ka dirto Google+ oo ay ugu dirto Gmail, laakiin waxay shardi u tahay in cinwaanka emaylka uusan muuqan.
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee Justin Maller, farshaxamiistaha ka soo shaqeeyay ROM Paranoid Android
Farshaxamiistaha Justin M. Maller wuxuu leeyahay darbiro tayo sare leh oo ku yaal degelkiisa, oo aad ka arki karto barnaamijka cusub ee 'Android ROM Paranoid' oo leh cusboonaysiinta Halo
Khadku wuxuu bilaabayaa Line Whoscall si loo aqoonsado loona joojiyo wicitaanada taleefanka ee Android
Line Whoscall ayaa laga heli karaa Play Store si loo aqoonsado loona joojiyo wicitaanada uu adeegsadaha doonayo xitaa la wadaago asxaabta iyo qoyska
Ku soo dejiso nooca cusub ee Gmail 4.7.2 adoo wata sawiro toos ah
Halkan waxaan kaaga tagaynaa nooca ugu dambeeya ee Gmail si toos ah apk oo si sahlan Google u saxiixday.
Barnaamijyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, Maareeyaha Gapps Maanta
Maamulaha Gapps waa barnaamij bilaash ah oo aan si toos ah uga soo dejisan karno apk ama Google iyo Android Play Store.
Muuqaallada ku saabsan Android
Casharka Android, oo sharraxaya sida loo abuuro aragtiyo iyo aragti kooxo ku jira Android.
Barnaamijyo Cajiib ah oo loogu talagalay Android, Maanta Super Simple Hurdo Waqti
Waqtiga jiifka fudud ee fudud waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo noo oggolaanaya inaan damino wixii cod ama muuqaal ah wixii ka dambeeya waqtiga loogu talagalay.
Androidsis waxay weydiineysaa: Noocee ayaa noqon doona kan ugu horreeya ee cusbooneysiiya Android 4.4 Kit Kat?
Androidsis waxay weydiineysaa waxa aad u maleyneyso inay noqon doonaan noocii ugu horreeyay ee weynaa ee cusbooneysiiya Android Kit Kat
Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, Maanta Waqtiga ugu fiican saacadda alaarmiga ee Android-kaaga
Waqtigu waa codsi, shaqadiisa iyo dabeecaddeeda cajiibka ah awgeed, waxaa lagu dari karaa oo keliya qeybta codsiyada cajiibka ah ee Android
WhatsApp: sida loo qariyo xaaladaada si looga fogaado inay ogaadaan dadka aad la xiriirto
Qari-Whatsapp-Status waa codsi bilaash ah oo shaqeynaya kaas oo naga caawin doona inaan qarinno waqtigeenna ku xirnaanta WhatsApp.
Barnaamijyo yaab leh oo loogu talagalay Android, maanta PicsArt Photo Studio
PicsArt Photo Studio waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee tafatirka sawirada ee aan ka heli karno boosteejooyinkeena Android.
Sahlo shaashad buuxda oo fudud oo ku jirta Chrome-ka Mac
Google Chrome wuxuu ku shaqeynayaa qaab fudud oo shaashadda buuxda loogu talagalay OS X. Si aad u hawlgeliso tijaabada raac tallaabooyinkan.
Kudar astaamo cusub SMS-kaaga oo wata 8SMS
8SMS waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay Android oo na siiya hawlo cusub oo loogu talagalay SMS-kaaga iyo MMS.
Barnaamijyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, maanta Fylee
Fylee waa mid ka mid ah codsiyadaas, taas oo ay ugu wacan tahay fudeydkeeda iyo shaqeynteeda, inay kasbatay ka mid noqoshada codsiyada cajiibka ah.
Barnaamijyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, Maanta Pushbullet
Pushbullet waa codsi loogu talagalay Android iyo fidinta loogu talagalay Chrome ama Firefox, taas oo noo oggolaaneysa inaan isku xirno Android iyo kombuyuutarkeena
Video-tutorial: Tallaabooyinka ugu horreeya ee lagu qaado Airdroid
Halkan waxaad kuheleysaa fiidiyoow-fiidiyow ah oo aan ku sharaxayo sida loogu xiro kombiyuutarka iyada oo loo marayo Wifi iyadoo la adeegsanayo Airdroid.
Barnaamijyo Cajiib ah oo loogu talagalay Android, Maanta Sawir Sawir
Sawiridda sabaynta ayaa ah mid ka mid ah codsiyada ka imanaya boosteejooyinka shirkadda LG taasna waxay noo oggolaaneysaa inaan ka bixinno sharraxaad raaxo leh Android-keena.
DashClock Widget ayaa lagu cusbooneysiiyay naqshad cusub iyo wax ka badan
Qalabka loo yaqaan 'DashClock Widget' waa codsi kuu oggolaanaya inaad ku darto wijjeerrada shaashadda qufulka isla markaana lagu sii dheereyn karo shaqeynta iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo badan
Xakamee kalooriyada ku jirta waxa aad ku cuno Kalori-ka Counter ee loogu talagalay Android
Kalooriga Counter waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo naga caawin doona inaan tirino kalooriyada ku jirta cuntada aan cunno.
Barnaamijyo Cajiib ah oo Android ah, ArmAmp Music Player
ArmAmp Music Player waa mid ka mid ah codsiyada ay tahay inay ku jiraan buugga cajiibka ah ee loogu talagalay Android iyada oo la siiyay shaqadeeda weyn iyo taageerada qaabab badan.
Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, Maareeyaha Hoy SA
Maamulaha SA waa mid ka mid ah codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android oo na siiya adeegsiga samaynta nuqullo nuqul ah oo qormooyin muhiim ah leh sida EFS
Carol-ka ugu caansan uguna caansan ee laga heli karo Android-kaaga
Codsi bilaash ah oo lagu dhageysto oo laga daawado khadka tooska ah ee ugu caansan uguna caansan Kirismaska ​​ee ka yimaada Android-kaaga
Sida loo abuuro Kaararka Video-ga Kirismaska ​​oo qosol badan
Halkan waxaad ku leedahay codsi bilaash ah oo naga caawin doona inaan abuurno kaararka fiidiyowga ee fiidiyowga gebi ahaanba bilaash ah.
Sida loo abuuro saamayn fiidiyoow oo xiiso leh FxGuru, (video-tutorial)
Halkaan waxaan kuugu keenayaa muuqaal fiidiyow ah oo dhameystiran oo aan ku sharaxayo sida FxGuru u shaqeeyo
Sida loo ilaaliyo Bakhaarkaaga Play-ka erey sir ah
Tabobar fiidiyow ah oo ku baraya sida loo ilaaliyo terminal-kaaga Android adoo ka shaqeynaya furaha Play Store si loo ilaaliyo iibsashadaada
Codsiyada cajiibka ah ee Android, Maanta FxGuru
FxGuru waa mid ka mid ah barnaamijyadaas oo kaliya laga heli karo qeybta Codsiyada Cajiibka ah ee loogu talagalay Android.
Sony Dooro daboolka wixii Android ah
Halkan waxaad ku haysaa deked kale oo Android ah, markan oo ku saabsan codsi u gaar ah Sony iyo xadka Xperia, Sony Select.
Lego waxay ku bilaabaysaa tilmaamaha dhismaha laba gaari oo Lego Technic ah oo ku yaal Play Store
Lego ayaa layaab ku noqotay iyadoo tilmaamaha dhismaha ee laba gaari oo Tikniko ah ay dhigato Google Play Store.
Goo Manager cusub beta leh horumarin muhiim ah
Halkan waxaan si toos ah kaaga tagayaa apk-ka nooca beta-ka cusub ee Goo Manager ee loogu talagalay Android.
Beddelashada Android: LG Optimus G shaashadda qufulka ee Android kasta
Halkan Modding Android waxaan kaaga tagayaa habka aad ugu rakibto LG Optimus G qufulka shaashadda wixii Android ah.
WhatsAppku wuxuu gaaraa 400 milyan oo isticmaale adduunka ah
WhatsApp waa adeegga ugu caansan ee farriinta khadka tooska ah isla markaana tirada cusub ee 400 milyan ayaa xaqiijinaysa
Maareeyaha ROM ayaa Google ka saaray Play Store-kii
Mid ka mid ah codsiyada ugu caansan ee lagu maareeyo ROM-yada shaki la'aan maareeyaha ROM. Maanta waxaa laga saaray Google Play Store.
Waxaad hadda abuuri kartaa oo aad maamuli kartaa fayl wadaag ah oo ku yaal Dropbox for Android
DropBox waa adeegga ugufiican ee kaydinta daruuraha maantana waxay heshay casriyeyn xiiso leh oo lagu maareeyo faylalka la wadaago.
Sida loo yareeyo cabirka sawiradaada Android-kaaga
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo aalad awood leh oo aan ku maamuli karno Sawiradeena laga soo qaado bartayada 'Android terminal'.
Sida loo soo diro kaararka kirismaska ​​ee qosolka leh galkaaga Android gebi ahaanba bilaash
Maanta waxaan rabaa inaan la wadaago codsi bilaash ah oo dareen leh si aan uga dhigno Kaararka Kirismaska ​​gebi ahaanba bilaash iyo kan Android.
Barnaamijyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, Maanta Sawirka Motion
Motion Shot waa codsi gaar ah oo ka mid ah daboolka Sony Xperia Z1 ee boosteejooyinka kale ee noo oggolaanaya inaan sawirro ka qaadno sida duubista fiidiyowga yar.
Ku ilaali arimahaaga gaarka ah ee Android ilaaliyaha gaarka ah
Qarsoodiga Ilaaliyaha waa qalab bilaash ah oo loogu talagalay Android kaas oo noo oggolaan doona inaan ku xirno ereyada sirta ah iyo faylasha shaqsiyadeed
U diyaari mobilkaaga Kirismaska, maanta Sawirada iyo Sawirada Tooska ah
Halkan waxaa ah codsiyo yar oo bilaash ah oo ka mid ah sawirrada kirismaska.
Cross DJ wuxuu u rogaa Android-kaaga isku-darka isku-darka
Cross DJ qayb ahaan wuxuu badalaa aalad isku qasan oo maanta laga bilaabo waxaad muusikada ku dhex qasan kartaa terminal-kaaga arjigan xiisaha badan.
Barnaamijyada Cajaa’ibka leh ee Android, Muuqaalka sabaynta
Fuulashada Toucher waa mid ka mid ah barnaamijyadaas, shaqadooda iyo naqshadayntooda darteed, ay muhiim u yihiin meel kasta oo ay ku xaddidan tahay cusbada Android.
Barnaamijyada la afduubay ayaa dhibaato weyn ku ah Android iyo iOS
Shaki kuma jiro in burcad-badeednimadu tahay aafada weyn ee Android iyo IOS iyo mid ka mid ah dhibco madow oo waaweyn ee labada nidaam hawlgal ee mobilada.
Adeegga farriimaha khadka tooska ah ee loo yaqaan 'KIK' ayaa gaaraya 100 milyan oo isticmaale
Kik wuxuu gaarey 100 milyan oo isticmaale online ah aduunka oo dhan waxaana loo heli karaa ikhtiyaar muhiim ah oo lagu rakibo bartaada.
Nooca xasiloon ee 26 ee Firefox ayaa laga heli karaa Play Store
Firefox waa mid ka mid ah daalacashada shabakadaha desktop-ka ee ugu caansan isla markaana nooca ay u samaysan tahay Android waxay si gaar ah uga dhex muuqataa.
Keyboard-ka Android wuxuu helaa nooc cusub oo loogu talagalay Gingerbread nostalgic
Kuwa u xiiseynaya Keyboard-ka Android, oo leh nooca cusub waxaad ku beddeli kartaa nidaamka midabka midab cad illaa buluug.
Barnaamijyada Cajaa’ibka leh ee Android, Browser sabaynta
Maanta qeybta codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android waxaan ku soo bandhigayaa Browser dul sabeynaya biraawsar web ah oo leh ikhtiyaar daaqadaha sabayn kara
Nooca cusub ee Google+ waxaad ku ruxi kartaa boosteejada si ay baraf ugu dhacdo sawiradaada
Google+ waxay heshaa nooc cusub oo si gaar ah loogu talagalay Kirismaskaan oo leh horumarin cusub iyo saameyn gaar ah oo Kirismas ah.
SwiftKey waxay heshaa nooc beta cusub ah oo leh Emoji iyo ikhtiyaar in lagu daro safka tirada sare
Ragga ka dambeeya horumarinta SwiftKey waxay qabanayaan shaqo aad u baaxad leh bilba bil kadib bilkasta waxay u badalayaan kumbuyuutarkooda caanka ah barnaamij weyn.
Instagram waxay ku bilaabaysaa nooca 5.0 "Instagram Direct"
Instagram waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu muhiimsan xilligan iyo sanadkaan 2014 waxay ku dartay warar wax ku ool ah.
Codsiga websaydhka Google Keep wuxuu horey u leeyahay astaamo la mid ah barnaamijka Android
Google Keep wuxuu jiray oo kaliya waqti dheer laakiin wuxuu noqonayaa runtii adeeg muhiim u ah qorista.
Dunida cajiibka ah Android !!
In kastoo aniga ahaan nidaamka hawlgalka Android uu yahay midka adduunka ugu fiican, tani macnaheedu maaha inay wali leedahay dhinacyo badan oo lagu hagaajinayo, oo ay kujirto amniga
Feejignaanta Android !!, Fariin cusub ayaa la ogaaday oo samayn doonta wicitaanno Premium ah
Ka taxaddar khayaanadan cusub ee la ogaaday ee samayn karta wicitaanno aan la oggolaanayn oo loogu talagalay lambarrada caymiska iyada oo la raacayo kharashka lagu daray.
Google waxay u soo bandhigeysaa barnaamijka Maareeyaha Aaladda Android barnaamijka loo yaqaan 'Play Store'
Maareeyaha Aaladda Android ayaa maanta laga bilaabay Google Play Store, kaas oo kuu oggolaanaya inaad heshid qalabkaaga si aad u joojiso ama u tirtirto xogteeda
Codsiyada cajiibka ah ee Android, Maanta ZIPme
ZIPme waxay noo siisaa qaab aad u fudud, si loo abuuro nuqulo nuqul ah oo ku saabsan barnaamijyadeena, xogta iyo faylasha ama faylalka Android-keena.
Barnaamijyada cajiibka ah ee Android, Groveshark
Groveshark waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo na siiya isla Sotify Premium iyada oo aan nooc kasta oo lacag bixin bille ah.
Wareegga nolosha ee barnaamijka Android
Casharrada Android, oo sharraxaya meertada nolosha ee waxqabadka, dhacdooyinka ka dhex dhici kara, iyo sida ay isugu xidhan yihiin.
Qalabka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android, maanta Dhacdooyinka Qulqulka Jadwalka Dhacdada
Waxaan bilaabaynaa qayb cusub oo ku jirta Androidsis halkaas oo aan ku soo uruurineyno qalabka Widget-yada ugu fiican kumbuyuutarradeena Android.
Sida loo qariyo baararka wareega ama badhannada dalwaddii ee Android-kaaga
Maqaalka soo socda waxaan ku tusayaa habka ugu fudud ee si otomaatig ah loogu qarin karo badhamada kama-dambaysta ah ee terminaalkaaga Android. Dabcan, waxaad u baahan doontaa inaad xidid noqoto.
Barnaamijyo yaab leh oo loogu talagalay Android, Maanta Snapy
Snapy waa kamarad loogu talagalay terminaalkeena oo na siiya waxyaabo gaar ah sida helitaanka degdegga ah ee codsi kasta oo aan ku jirno.
Soodejiso nooca ugu dambeeya ee Hangouts 2.0.2.16
Halkan waxaad kuheysaa cusbooneysiin cusub ee Hangouts oo leh cilad weyn iyo cilado kale.
Xusuusnow Android: MIUI Music Player nooca 1.0
Halkan waxaad ku leedahay MIUI Music Player oo ku jira nooca 1.0 ee dhammaan nostalgic iyo qof kasta oo aaminsan inuu weli yahay barnaamijka ugu wanaagsan ee muusikada Android.
Halkan waxaad kuheleysaa Oppro Find 5 Launcher oo leh dhamaan waraaqihiisii ​​asalka ahaa iyo dhamaan howlaha firfircoon sida saameynta cimilada.
Sida loo aamusiyo kaamerada fure iyada oo aan loo baahnayn in lagu xidido CameraMute
CameraMute waa codsi bilaash ah oo aan ka heli karno XDA Developers kaas oo noo ogolaanaya inaan aamusno kamaradeena Android adigoon xidid aheyn.
Google Play Music waxaad hadda kala soo bixi kartaa muusikadaada kaarka SD [Download APK]
Google Play Music wuxuu helaa cusbooneysiin cusub oo kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo dhammaan muusikadaada keydinta dibadda.
Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, maanta Pixel kamarad bilaash ah oo leh fursado badan
Pixel waa kamarad loogu talagalay Android oo na siisa waxyaabo badan oo saameyn ah oo aan ka badnaan karin qaybta Codsiyada Cajiibka ah ee loogu talagalay Android.
Launcher Xperia Honami 1 ayaa diyaar u ah wixii Android ah
Halkan waxaad ku haysaa xiriiriyaha si aad u soo dejiso Xperia Honami 1 Launcher oo leh habka rakibaadda saxda ah.
Cusboonaysiinta iOS7 waxay burburinaysaa Android 4.4 Kit Kat
iOS7 waxay ku buuxineysaa xogteeda cusbooneysiinta rasmiga ah aaladeeda iyo cashar Google u ah sida wax loo qabanayo.
Magus Launcher Tilmaamuhu hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo
Waxaan hadda kala soo bixi karnaa Play Store Magus lafteeda, Launcher ka duwan oo fahmaya dhaqdhaqaaqyadeena.
Ku rakibida jawiga horumarinta iyo mashruucii ugu horreeyay ee ku saabsan Android
Android SDK iyo casharka rakibida jawiga horumarinta, oo leh nooca ADT 22.
Tilmaamaha aasaasiga ah ee barnaamijka ku jira Android
Waxaan sii deyneynaa hage cusub, markan si aan wax uga barano barnaamijka Android bilowga, qaab fudud oo toos ah.
DuoLingo waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.0 iyadoo la cusbooneysiinayo interface-ka iyo in ka badan
DuoLingo waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.0 oo keenaya xoogaa horumar ah sida isdhexgalka isdhexgalka iyo shaashado cusub si loo muujiyo horumarka.
Qalabka Cajiibka ah ee loogu talagalay Android, Soosaaraha Wakelock Key-Battery
Maanta waxaan rabaa inaan kuu soo bandhigo qalab ay ansixiyeen XDA Developers oo u adeegi doona in lagu ogaado barnaamijyadooda ku shaqeeya batteriga badan ee ku jira Android-keena.
Google Now waxay la soo kacdaa iyada oo OK Google xitaa Isbaanish ah
Halkan waxaan kuugu keenayaa xalka si Google Now ay ugu soo kacdo codkeena markaan dhahno weedha OK Google, xitaa haddii lagu qaabeeyo Isbaanish.
Asus Padfone 2 cimilada iyo saacadda widget ee dhammaan Android
Halkan waxaan kuugu keenayaa dekedda Widget ee Asus Padfone 2 Widget si aad ugu rakibtid meel kasta oo ka mid ah qalabka Android.
Spotify tijaabada bilaashka ah ee 48 saacadood
Spotify waxay na siineysaa marinkaaga Soptify Premium muddo 48 saacadood ah si aan u tijaabino dhammaan howlaheeda gaarka ah.
Digniinta amniga!, Ka taxaddar xayeysiinta xun
Aad uga taxaddar boorarka arjiga ee na siiya xayeysiis xaasidnimo ah si aad ugu qorto adeegyada caymiska
Barnaamijyada cajiibka ah ee Android, 3D furaha
Maanta waxaan soo bandhigayaa mid ka mid ah codsiyadaas cajiibka ah ee loogu talagalay Android kuwaas oo u shaqeynaya sidii ay u fiicnaayeen.
Ha iloobin sannad-guurada asxaabtaada weligood iyadoo la adeegsanayo Barnaamijka Dhalashada
Maalinta dhalashada waa codsi bilaash ah oo loogu talagalay Android oo na siiya inaan ka feejignaano taariikhaha lagu muujiyey hab gebi ahaanba muuqaal ah,
Spotify Connect wuxuu yimaadaa Android
Spotify Connect ayaa daryeelaysa in laga sii daayo adiga kuhadlaya haday taageeraan qaabkan.
Sida loo qaabeeyo boostadaada kulul ee ku jirta Android
Tabobar tallaabo-tallaabo ah si aad si sax ah ugu hagaajiso koontadaada boostada Kulul ee ku taal Android.
YouTube waxaa lagu cusbooneysiiyay horumarin dhanka isdhexgalka ah, raadinta iyo inbadan [Download APK]
Kadib isbadalkii muranka dhaliyay ee faallooyinka YouTube ee hada ka hoos shaqeeya shabakada bulshada ee Google+, maanta waxay heshay nooc cusub.
Sida loo duubo wicitaanada taleefanka ee Android
Maanta waxaan kugula talinayaa codsi bilaash ah oo bilaash ah oo naga caawin doona inaan ka duubno wicitaanada taleefanada ka socda Android-ka.
CheapCast, barnaamijka beddelaya ChromeCast, wuxuu helaa cusbooneysiin weyn
CheapCast waa codsi la bilaabay Ogosto ee la soo dhaafay oo lagu beddelayo astaamaha ay Chromecast bixiso iyadoo la adeegsanayo Android-kaaga.
Codsiyada xiisaha leh ee loogu talagalay Android, Rotary Dialer
Maanta waxaan rabaa inaan kugu soo bandhigo Codsiyada Cajiibka ah ee loogu talagalay Android qaar ka mid ah Wicitaano aad u xiiso badan oo si fiican loo dhammeeyey oo dib noogu soo celin doona waqtigii aan soo dhaafnay.
Sida loogu wareejiyo Android ka macruufka by Eric Schmidt
Tilmaame weyn oo uu bixiyay Eric Schmidt, madaxweynihii hore ee Google, inuu uga wareego iOs una wareego Android dhowr talaabo oo fudud oo si fiican loo sharxay
Ttpod waa mid ka mid ah codsiyadaas, sababtoo ah dabeecaddiisa cajiibka ah, waxay ku kasbadeen inay ku jiraan buugga codsiyada cajiibka ah ee Android.
Codsiyo aan caadi ahayn oo loogu talagalay Android, maanta Airvidplay
Maanta waxaan rabaa inaan ku tuso mid ka mid ah codsiyadaas, oo ay ugu wacan tahay fudeydkiisa iyo shaqeynteeda, uqalma inuu ku jiro buugga codsiyada cajiibka ah ee Android.
Halkan waxaan kuugu keenayaa nooca tijaabada beta ee Facebook 4.0 ee loogu talagalay Android iyo soo degsashada tooska ah ee apk.
Lahaanshaha 'Epic Launcher' wuxuu siinayaa qaabka Kit Kat-kaaga Android-kaaga
Launcher Epic waa Launcher gabi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay Android oo na siiya waxqabadka u beddelashada Android-ka muuqaalka Kit Kat.
SoundCloud, ogaanshaha muusikada daruuraha
SoundCloud waa codsi bilaash ah oo noo ogolaanaya inaan dhagaysto muusikada khadka tooska ah isla markaana aan la wadaagno dhammaan asxaabteena.
Dan Morril wuxuu sharxayaa cusbooneysiinta OTA iyo sababta aan xogta looga tirtiri karin Qaab-dhismeedka Adeegga Google
Ka tirtirka xogta Nidaamka Adeegga Google waxay sababi doontaa xasillooni darro nidaamka iyo codsiyada qaarkood ma heli doonaan ogeysiisyo.
WallpaperHaa, boqolaal waraaqo sawireed ah oo laga gaari karo Android-kaaga
Maanta waxaan kuu keenayaa codsi aan kuu oggolaan doonin inaad si toos ah ugu soo degsato boqolaal tayo sare leh Sawir-gacmeedyo HD-gaaga ah.
Apex Launcher beta wuxuu diiradda saarayaa dhaqaajinta hufnaanta bar-tilmaameedka iyo ogeysiisyada ay Android 4.4 KitKat u keento sidii ugub cusub.
Mega waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay Android oo aan ku siineynin wax intaa ka badan oo aan ka yareyn 50GB oo ah kaydinta daruuraha bilaashka ah.
Halkan waxaad ku haysaa APK si toos ah loogu soo dejisto nooca ugu dambeeya ee Google Translate, tarjumaha ugu fiican ee Android.
Codsiyada cajiibka ah ee Android, maanta MacroDroid
MacroDroid waa mid ka mid ah barnaamijyadan loogu talagalay Android kaas oo fududeeya shaqada ama hawsha otomaatiga ficillada ku saabsan boosteejooyinkeena.
Barnaamijka SmartGlass ee Xbox One ayaa hadda ku jira Google Play
SmartGlass hadda waa la soo dejin karaa si loogu diyaar garoobo daahfurka Xbox One, qalabka cusub ee Microsoft, Jimcaha, Noofambar 22.
Labada barnaamij ee ereyga ereyga ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Waxaan kuu soo qaadaneynaa labada codsi ee ugufiican codbixinta codka ee Android sida SVOX iyo IVONA oo si fiican u buuxiya arjiga asalka ah.
Launcher Google Experience Android 4.4 Kit Kat dhammaan Android
Maanta waxaan rabaa inaan dhammaantiin idinla wadaago Launcher Experience Google oo ay soo gudbiyeen adeegsade XDA Developers oo ansax u ah dhammaan noocyada Android.
Browser-ka loo yaqaan 'Dolphin Browser' ayaa la casriyeeyay iyadoo la adeegsanayo habeynkii iyo xalka dhibaatada soo dhawaanta ee ku jirta Android 4.4
Browser-ka loo yaqaan 'Dolphin Browser' waa mid ka mid ah daalacashada shabakadaha ugu fiican ee aad ka heli karto Android-ka waxaana lagu cusboonaysiiyay habayn cusub oo habeen iyo cilad-bahal ah.
Sida loogu daro WhatsApp Heads-ka wada shaqeynta
Maanta waxaan rabaa inaan kuu soo bandhigo codsi gebi ahaanba bilaash ah kaas oo aan ku xoojin doonno waxqabadka Wadahadalka Heads ee barnaamijkaaga WhatsApp.
Sababta astaamaha maran ee ku yaal baarka ogeysiiska ee Android 4.4
Astaamaha madhan ee ku jira Android 4.4 waxay leeyihiin labadooda sababood ee muhiimka ah ee midabka u beddelaya noocyadii hore.
Dhammaan amarada cod ee Google Now
Google Now waxay noqon kartaa mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan Google ee ku shaqeeya Android, taas oo ay ugu wacan tahay tirada badan ee amarrada codka ee ay leedahay.
Filimada Google Play ee xayeysiinta ah, soo dejiso filim gaaban oo animated gebi ahaanba bilaash ah
Waqti xaddidan, Filimada Google Play waxay na siineysaa soo dejinta Shaun the Sheep The Big Chase, oo ah filim gaaban oo animated ah gebi ahaanba bilaash.
1TB ee kaydinta daruurta bilaashka ah ee leh 'Tolder'
TFolder waa codsi loogu talagalay Android oo na siisa 1TB kaydinta gebi ahaanba bilaash ah daruuraha
Habka immersive ee Android 4.4 si loogu ciyaaro waxyaabo badan oo warbaahin ah shaashad buuxda
Habka immersive ee Android 4.4 KitKat wuxuu bixiyaa suurtagalnimada isticmaalka shaashadda dhammaan kiniinnada iyo taleefannada casriga ah si loogu ciyaaro wixii nuxur ah.
Soodejiso BBM cusbooneysiiyay APK loogu talagalay Android (15/11/2013)
Halkan waxaad ku haysaa APK si toos ah loogu soo dejisto cusbooneysiintii ugu dambeysay ee BBM ee loogu talagalay Android.
Qaabka wada hadalka cusub ee loo yaqaan 'Google Now' amarada qaarkood
Cusboonaysiinta weyn ee raadinta Google ay heshay waxay noo oggolaaneysaa inaan wadahadal yar kula yeelano Google Now bartayada 'Android'.
Naqshadaynta cusub ee Facebook Messenger ayaa hadda laga heli karaa qof kasta oo ku jira Google Play
Facebook Messenger waxay heleysaa cusbooneysiin soo bandhigeysa nashqad cusub oo la jaanqaadaysa waxa laga filayo shabakadda bulshada ee caanka ah.
Cusboonaysiin weyn oo ku saabsan Raadinta Google waxay u keentaa qaar ka mid ah astaamaha KitKat aaladaha gaboobay
Raadinta Google waxay heshaa cusbooneysiin cusub oo leh horumarin weyn sida taageerada GEL, kaararka cusub, iyo qaabka wada sheekaysiga.
Google Plus cusbooneysiin cusub oo la heli karo APK
Waxaan horeyba uheynay cusbooneysiin kale oo cusub Google Plus oo ay kujiraan horumarino muhiim ah sida ku darida tikniyoolajiyadda NFC si loo wadaago waxyaabaha
Dayframe waa muuqaal sawir qaali ah oo qaas ah oo loogu talagalay Android
Dayframe waxay noqon doontaa codsi gaar ah oo loogu talagalay Android isla waqtigaas oo ah qaab sawir ah ee shabakadahaaga bulshada
Kaamirooyinka Wanaagsan ee ku shaqeeya Android ee ka socda iOS
Kaamirada Awesome waxay uga timaadaa Android ka macruufka in kabadan 20 milyan oo soo degsasho iyo dhibco ka sarreysa dhibcaha 4.5 ee Apple App Store.
Nova Launcher 2.3 beta wuxuu keenayaa qallooca Android 4.4 KitKat [Download APK]
Nova Launcher waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan Android launchers ee aad ka heli karto Google Play, oo leh xirfado habeyn sare.
Sagaal sifooyin aan caan ahayn oo lagu yaqaan Android 4.4 KitKat
Waxaa jira astaamo Android 4.4 KitKat ah oo aan muhiim u ahayn kuwa ugu caansan, laakiin dadka isticmaala qaarkood way noqon doonaan.
Gatwin oo ah codsi Android ah oo lacag kaa siiya inaad ku isticmaasho moobilkaaga
Gatwin waxaa loo heli karaa boos celin iyadoo si toos ah loogu diiwaangeliyo websaydhkeeda gatwin.com.
Soo dejiso oo rakib qalabka cusub ee LG Optimus G2
Halkan waxaad ku haysataa ZIP si loogu rakibo adoo ka soo kabanaya LG Optimus G2 Launcher cusub oo ay la socoto hawsheeda Knock Knock.
CloudMagic, macmiil fara badan oo badan oo loogu talagalay Android iyo iOS
CloudMagic waxay na siisaa suurtagalnimada, hal codsi oo keliya, si loo xakameeyo dhammaan xisaabaadka emaylkeena.
Codsiyada cajiibka ah ee loogu talagalay Android, maanta Draw2Dial
Drawn2Dial waxay na siisaa hab kale oo aan wicitaanno ugu sameyn karno adoo wacaya xawaaraha. Mid ka mid ah codsiyadaas cusub ee mudan in la ogaado
Soo dejiso Khariidadaha Google 7.4 cusboonaysiinta apk 8/11/13
Halkan waxaad ku haysaa nooca ugu dambeeya ee la cusboonaysiiyay ee Khariidadaha Google 7.4 laga bilaabo Noofambar 8, 2013 si toos ah loogu soo dejiyo APK.
Beddelashada Android: U rog terminal-kaaga Windows Phone
Waxaan ku bilownay qaybtaan cusub ee Modding Android anagoo badalnay muuqaalka terminalkeena midka Windows Phone.
Nooca cusub ee kumbuyuutarka Android ee Google Play oo leh dhadhanka Android 4.4 KitKat
Cusbooneysiinta cusub ee Keyboard-ka Android waxay kuu ogolaaneysaa inaad qortid jumladaha oo dhan adoo adeegsanaya tilmaamo adoo wax qoraya adigoon u baahan inaad fartaada kor u qaaddo.
Ciyaaryahanno badan ayaa yimaada Terraria
Terraria waa mid ka mid ah kulamada ugu khaaska ah ee ka jira Android, haddii aan hadda ku darno habka multiplayer-ka hoostiisa Wi-Fi, baashaalku wuu badiyo.
Bilowga 'SickSky Launcher', oo ah 'Launcher' yar oo ka yimid abuuraha Zeam Launcher
SickSky Launcher oo ka yimid abuureha 'Zeam Launcher' wuxuu na siiyaa isla waayo-aragnimada Zeam Launcher minimalist laakiin la jaanqaaday waqtiyada hadda jira.
Sida loo joojiyo fariimaha SMS-ka Hangouts
Haddii sabab kasta ha noqotee, aadan rabin inaad haysato ikhtiyaar aad ku hesho farriimo SMS ah oo ku socda Hangouts firfircoon, waxaan ku tusi doonaa sida ugu fudud ee loo demiyo.
Cusbooneysiinta ugu dambeysay ee Hangouts, APK soo degso toos ah
Toos u soo dejiso apk-ka nooca cusub ee Hangouts v2.0.122 oo leh cilladaha cilladaha ee howlaha cusub ee isku dhafan sida SMS.
Sida loo habeeyo Android-kaaga ugu badnaan leh Qaab-dhismeedka Xposed
Hayso Android-kaaga gebi ahaanba sidaad uhesho Qaab-dhismeedka 'Xposed Framework' adiga oo aan u baahnayn inaad feylal kasta feylal ku dajiso.
Barnaamijyo qosol badan oo loogu talagalay Android, LOL Clips Funny
LOL Funny Clips waa codsi leh qaab muuqaal ah oo qaab-dhismeedkiisu yahay Holo oo si toos ah u heli kara dhammaan waxyaabaha kaftanka badan ee kugu jira tubbadaada.
Abka Google Voice Synthesis wuxuu ka muuqanayaa Google Play
Mid ka mid ah yoolalka Google ayaa ah in inta badan barnaamijyada nidaamka Android lagu keeno Google Play, sida Hadalka Hadalka ama kiiboodhka.
Abaalmarinta Fikradaha Google, kasbato dhibco aad ku bixiso Play Store
Abaalmarinta Abaalmarinta Google waxaad ku ururin kartaa dhibco aad ku bixiso kaydinta dalabka Android ee Google Play Store.
Buugaag bilaash ah todobaad kasta oo leh Free-eBooks
Buugaag Bilaash ah oo loogu talagalay Android waxay na siisaa suurtagalnimada inaan kala soo baxno illaa shan e-buug bil kasta bilaash.
Ku soo dejiso buugaagta adeegga oo dhammaystiran xarumaha Google
Halkan waxaan kuugu keenaynaa buugaagta adeegga oo dhammaystiran oo loogu talagalay dhammaan xarumaha Nexus iyo hagaha bilawga degdegga ah ee Android 4.4 Kit Kat oo gebi ahaanba bilaash ah.
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta SoundSeeder
SoundSeeder waa mid ka mid ah codsiyadaas cajiibka ah ee loogu talagalay Android, taas oo u muuqata wax cajiib ah inay gebi ahaanba xor yihiin.
Iyada oo loo yaqaan 'Galaxy Lock Screen' waxaan lahaan doonnaa dhammaan waxqabadka dalabka gaarka ah ee Samsung wixii ah Android 4.0 ama terminal ka sareeya
Dhammaan waraaqaha waraaqaha ama Waraaqaha ee Android 4.4 Kit Kat iyo Nexus 5 oo si toos ah loogala soo baxayo hal feyl oo ZIP ah.
Soo dejiso Play Store 4.4.22, cusbooneysiintii ugu dambeysay apk
Toos u soo degso nooca ugu dambeeya ee Play Store 4.4.22 qaab APK ah si aad ugu rakibto wixii Android 4.0 ah ama noocyo ka sareeya.
Soo dejiso kumbuyuutarka cusub ee Nexus 5 iyo Android 4.4 Kit Kat
Codsi caan ah, halkan waxaan kuugu keenayaa kumbuyuutarka cusub ee Nexus 5 iyo Android 4.4 Kit Kat. Si toos ah u soo dejiso iyo qaabka APK.
Android 4.4 KitKat: Is-dhexgalka SMS-ka cusub
In Android 4.4 KitKat waxaan u isticmaali karnaa arjiga SMS-ka ee aan dooneyno inuu yahay midka ugu weyn ee loo diro loona helo SMS.
Soo dejiso barnaamijyada cusub ee Google Apps Nexus 5: Farshaxan cusub, Xisaabiyaha iyo barnaamijyo dheeri ah
Halkan waxaan kuugu keenayaa codsiyada haray ee Google Apps-ka cusub ee loogu talagalay Android 4.4 iyo Nexus 5 cusub, dhammaantoodna waxaa loo geeyay wixii Android ah
Soo dejiso barnaamijyada cusub ee Google wuxuu daboolayaa Nexus 5: Email, Gmail iyo Kalandarka Google
Halkan waxaan kuugu keenayaa barnaamijyada cusub ee Google sida Gmail, Email iyo Google Calendar oo la cusbooneysiiyay noocoodii ugu dambeeyay waxaana si toos ah looga qaatay Android 4.4.
Soo dejiso nooc cusub oo Khariidadaha ah & Muuqaalka Wadada APK
Halkan waxaad kuheleysaa labada Khariidadood & Wadada Aragtida APK daboolida sawirka ugu dambeeyay ee Nexus 5 iyo Android 4.4 Kit Kat.
Waxaa xusid mudan Android 4.4 KitKat: La jaanqaadida dareemayaal awood yar iyo shaqooyin si loo tiriyo talaabooyinka
Android 4.4 KitKat wuxuu kuu keenayaa sheeko cusub sida iswaafajinta dareemayaasha tamarta tamarta yar iyo inaad tirin karto tillaabooyinkaaga.
Si toos ah ugu soo dejiso barnaamijka cusub ee Android 4.4 Kit Kat Launcher APK
Mid ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan nidaamka hawlgalka Android waa in isla marka nooc cusub la soo saaro ...